Zimbabwe · The Score
# zimbabwe - Saturday 16 March, 2013
Zimbabweans vote on new constitution that would curb Mugabe’s power
16/03/13 3,380 Views 5 Comments Voters are expected to roundly back the text, which would introduce presidential term limits, beef up parliament’s powers and set elections to decide whether 89-year-old Robert Mugabe stays in power. Share3 Tweet4 # zimbabwe - Tuesday 29 January, 2013
From Business ETC Zimbabwe
29/01/13 20,445 Views 90 Comments Maybe Robert Mugabe’s been spending the money on suits. Share152 Tweet # zimbabwe - Tuesday 22 January, 2013
22/01/13 4,273 Views 8 Comments The witchdoctor and a man who was hoping to improve his finances were among the dead, witnesses said. Share237 Tweet # zimbabwe - Friday 20 July, 2012
Mugabe’s tenure in Zimbabwe could finally be ended by new constitution
20/07/12 3,158 Views 5 Comments A new draft constitution, three years in the making, would impose term limits on the President and reduce his powers. Share Tweet9 # zimbabwe - Thursday 12 April, 2012
12/04/12 1,331 Views 5 Comments The President of Zimbabwe arrived home from Asia this morning as his party denied reports he had suffered a health emergency. Share Tweet5 # zimbabwe - Tuesday 10 April, 2012
10/04/12 2,911 Views 19 Comments The Zimbabwean leader is reportedly undergoing medical treatment in Singapore amid speculation he may be about to hand over power. Share Tweet6 # zimbabwe - Tuesday 21 February, 2012
21/02/12 2,023 Views 15 Comments The Zimbabwean president, speaking on his 88th birthday, also gave tips on how to live a long life. Share1 Tweet4 # zimbabwe - Thursday 16 February, 2012
From TheJournal.ie Animals
Four accused of eating endangered Zimbabwe tortoises 16/02/12 3,086 Views 19 Comments The men admitted killing 40 of the endangered animals, while another 13 live tortoises were found in a house raised by invesetigators. Share2 Tweet5 # zimbabwe - Tuesday 14 February, 2012
Zimbabwean diamonds “could fund bloodshed” in future elections
14/02/12 892 Views 1 Comment A new report alleges that funds from Zimbabwean diamond purchases could fund violence in the country during any future elections. Global Witness is urging people not to buy diamonds from the Marange region. Share Tweet4 # zimbabwe - Tuesday 10 January, 2012
10/01/12 3,412 Views 13 Comments The impoverished country has banned the sale of used underwear, with one newspaper calling second-hand pants “dehumanising”. Share12 Tweet27 # zimbabwe - Sunday 8 January, 2012
08/01/12 17,427 Views 60 Comments The Australian 22-year-old swam to safety after falling into the Zambesi River in Zimbabwe despite her two feet being tied together. Share99 Tweet68 # zimbabwe - Monday 12 December, 2011
From TheJournal.ie Forty More Years
12/12/11 1,305 Views 15 Comments Robert Mugabe has been at the helm of Zimbabwe for 31 years, but has been nominated by his Zanu PF party for another term. Share Tweet7 # zimbabwe - Tuesday 6 December, 2011
06/12/11 1,641 Views 1 Comment The NGO said the diamond certification scheme has failed to prevent the processing of conflict diamonds in Ivory Coast, Zimbabwe and Venezuela. Share6 Tweet4 # zimbabwe - Friday 2 December, 2011
Zimbabwean Prime Minister divorces wife after 12 days 02/12/11 4,822 Views 8 Comments He blamed stories that suggested he had married Locadia Karimatsenga because she was pregnant with twins – and he said there was “now an underhand and active political hand” damaging his reputation. Share12 Tweet11 # zimbabwe - Monday 8 August, 2011
Blood diamond ‘torture camp’ discovered in Zimbabwe 08/08/11 1,249 Views No Comments An investigation has revealed claims of systematic torture, beatings and rape at one Zimbabwe’s diamond mines. Share1 Tweet # zimbabwe - Thursday 10 March, 2011
Zimbabwean Prime Minister says he wants to end coalition 10/03/11 551 Views 1 Comment Morgan Tsvangirai has been part of an unlikely power-sharing agreement with Robert Mugabe since 2009 but tensions have continued to simmer. Share Tweet6 # zimbabwe - Tuesday 8 March, 2011
08/03/11 799 Views 2 Comments US says it’s concerned about suggestions Zimbabwe may be open to assisting Iran with its enrichment programme, although it has no evidence it’s happening. Share1 Tweet12 # zimbabwe - Wednesday 23 February, 2011
23/02/11 285 Views No Comments The ICC have charged the Australian captain after he allegedly damaged a dressing-room TV set on Monday. Share Tweet2 # zimbabwe - Tuesday 15 February, 2011
15/02/11 397 Views No Comments A gutsy mid-order showing gave Ireland victory over Zimbabwe in this morning’s final World Cup warm-up match. Share Tweet2 # zimbabwe - Tuesday 8 February, 2011
08/02/11 170 Views No Comments We look forward to Ireland versus Wales this evening, keep an eye on Jamie Heaslip’s return from injury, and check in with Ireland’s cricketers in their World Cup warm-up match against Kenya. Share Tweet # zimbabwe - Thursday 4 November, 2010
From TheJournal.ie Lion Attack
04/11/10 478 Views No Comments Conservationist warn that animals are becoming unpredictable because of an increase in poaching. Share Tweet # zimbabwe - Thursday 5 August, 2010 Zimbabwe 05/08/10 ZIMBABWEAN’S CIVIL Aviation Authority confirmed reports that a plane had been involved in an accident at Harare International Airport today. Hours later, authorities admitted that it was a safety drill and there had been no crash. An official said that distressed relatives seen at the airport were actually actors, but the BBC reports that few people appear to have been informed of the drill.
The Score Latest News Feed#zimbabwe Latest News Feed	Report an error, omission or problem: